Wararka - Shanghai MEOKON 2020 "Quluubyada xinjirowga ayaa la kulmaya xoog Abuur wax qabad, wax cusub oo dadaal" Waaxda iibka ee xilliga dayrta waxqabadyada dhismaha kooxda
Shanghai MEOKON 2020 "Qalbiga xinjiruhu wuxuu kulmayaa xoog Abuur wax qabad, wax cusub oo dadaal" Waaxda iibka ee dhismaha kooxda dayrta
Si kor loogu qaado wadajirka kooxda, xiriirka iyo iskaashiga;wanaajinta wacyiga wada shaqaynta firfircoon iyo xirfadaha isgaadhsiinta, si loo dhiirigaliyo xubnaha kooxda inay wajahaan caqabad, jebiyaan naftooda, taabta awooda, oo ay sii daayaan xamaasadda;qoto dheer u yeelo dhaqanka shirkada "MING IN HEART, KONG IN ACT" Dhanka kale, kobciya wakhtiga firaaqada ee shaqaalaha.Waaxda Iibka ee Shanghai Meokon waxay qabatay hawl laba maalmood ah oo koox dhismeed ah Sebtember 2020.
Sebtembar 19, dhammaan shaqaalaha waaxda iibka ee Suzhou Taihu Sanshan Island, waxay bilaabeen hawlo fidinta dayrta oo leh mawduuca "Quluubta xinjiruhu waxay la kulmaan xoog Abuur dhalaal, hal-abuur iyo dadaal".Hawshani waxa ay door wanaagsan ka ciyaartay kor u qaadida isku xidhnaanta kooxda, Xoojinta xidhiidhka iyo is waydaarsiga xubnaha kooxdu waxa ay door fiican ka ciyaartay horumarinta.
Ka dib markii ay dhamaystireen baaskiil wadida farxada leh ee jasiiradda, dhismaha kooxda ayaa si rasmi ah u bilaabay.Intaa ka dib, waxa aanu bilownay tartanka isu-gudbinta jiirada.Sida ku cad qorshaha tababaraha, waxaan sameynay PK waqti cayiman oo u dhexeeya labada kooxood.Hooska dhagaxa ma aha oo kaliya ka tarjumaysa awoodda caawinta ee xubnaha kooxda, laakiin sidoo kale waxay awood u siinaysaa shakhsiyaadka inay si fiican u jebiyaan naftooda;waxaa jira shaqo kooxeed iyo tartan.
Baaskiil ku wareega jasiiradda
Kufsi dhagax ah
Marka laga soo tago isu-gudbinta jiirada, waxaan sidoo kale ciyaarnay ciyaaraha kale ee tartanka kooxeed - "Magic Circles".Inta lagu jiro ciyaarta, dadka qaar ayaa mas'uul ka ah jimicsiyada goobta, qaar ayaa mas'uul ka ah habeynta tillaabooyinka fulinta, qaar ayaa mas'uul ka ah xasuusinta taxaddarrada, qaarna waxay mas'uul ka yihiin sawirro iyo muuqaallo ... Dhammaan xiriiriyeyaasha waxaa loo fuliyaa si habsami leh. iyo hab madadaalo leh.Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa dhammaatay, xubnaha kooxdu waxay sidoo kale kordhiyeen kalsoonidooda iyo isfahamka iskaashiga.
Ciyaarta ka dib, kaliya ma hayno abaal-marin laakiin sidoo kale ciqaab.
Waxa baqshadda cas ku jirta yaab
Dhamaadka ciyaaraha maalinta, fiidkii waa wakhtiga firaaqada iyo madadaalada, barbecue: skewers, ciyaaro kaararka, heeso;dabacsan oo faraxsan.
Ka dib markii ay dhammeeyeen hawlihii maalintii koowaad, waxaan nimid buurta Taihang ee jasiiradda Sanshan maalintii xigtay.Anagoo ku raaxaysanayna muuqaalka quruxda badan, waxaanu sidoo kale dhagaysanay taariikhda iyo dhaqanka Buurta Taihang oo uu sharaxay hagaha.
Hawl-dhiskii kooxda ee labada maalmood socday ayaa ku dhammaaday si qumman.Dhismaha kooxdu waxay xoojisay xidhiidhka iyo iswaydaarsiga asxaabta, kor u qaaday isku xidhnaanta waaxda dhexdeeda, isla markaana, sidoo kale waa khibrad karti shaqo kooxeed.
Waqtiga boostada: Febraayo-22-2021